QUANZHOU XIELI मोल्ड कं, लि
QUANZHOU XIELI मोल्ड कं, लिमिटेड डिजाइन, अनुसन्धान र उच्च गुणस्तरीय जुत्ता मोल्ड को विकास मा विशेषज्ञता प्राप्त छ। 58000 वर्ग मीटर को एक क्षेत्र संग प्रसिद्ध Jinjiang, चीन मा जुत्ता राजधानी शहर मा स्थित छ। हाम्रो कम्पनी अप-टू-डेट उन्नत सीएनसी प्रशोधन केन्द्र मेशिन र मोल्ड र ईवा पूर्ण स्वचालित आकार इंजेक्शन बनाउन को लागी आवश्यक उपकरण आयात गरीएको छ। मेसिनरी। ईवा/पीवीसी/रबर/TR/PHYLON जूता मोल्ड को लागी १० भन्दा बढी परीक्षण मिसिन संग।
XIELI एक ब्रान्ड नयाँ सकारात्मक रवैया अपनाउनेछ, वर्तमान लाभ मा भरोसा छ र पुग्न को लागी कोशिश: सही र उत्तम "।
1. व्यावसायिक: जूता ढाँचा बनाउने अनुभव को 20 वर्ष बलियो प्राविधिक टीम र पेशेवर डिजाइनर सुनिश्चित गर्न। उच्च गुणस्तरीय molds को कारण, यो घरेलू र विदेश जूता कम्पनीहरु बाट राम्रो प्रतिष्ठा प्राप्त गरेको छ।
2: XIELI सबैभन्दा ठूलो मोल्ड सूचीबद्ध र सबैभन्दा राम्रो जुत्ता मोल्ड निर्माण कम्पनीहरु inJ injiang एक राम्रो सेवा सुनिश्चित गर्न को लागी हो। हामी पनि फूजो शहर मा शाखा कारखाना छ।
4. हामी संसारभरि बिभिन्न जुत्ता कारखानाहरु को लागी मोल्ड (सबै रिश्ते ईवा जूता मोल्ड, पीवीसी जुत्ता मोल्ड र रबर TRshoe मोल्ड मा विशेष लाभ) बनाउँछौं।
5. XIELI राम्रो सेवा, उच्च गुणस्तर, छिटो प्रतिक्रिया र समयमै डेलिभरी संग जुत्ता मोल्ड को सबै प्रकार बनाउन सक्नुहुन्छ। हामी संग सहयोग, समय, ऊर्जा, र पैसा बचाउने मतलब।
हाम्रो कम्पनी ईवा इंजेक्शन मोल्ड, Pvc airblow मोल्ड, ईवा मोल्डिंग mould.Rubber/TPR/TR/TPU outsole moul मा माहिर छ ... र यति मा माहिर। हामी एक ग्राहक उन्मुख उद्यम हो। हामी प्रतिभाशाली कामदारहरु, उन्नत टेक्नोलोजी र वैज्ञानिक व्यवस्थापन को उपयोग गरेर हाम्रो डिजाइन र उत्पादनहरु लाई अनुकूलन मा राख्न को लागी चीन मा र बाहिर ग्राहकहरु बाट विश्वास र स्वीकृति प्राप्त गर्दछौं।
तपाइँको वा हाम्रो जुत्ता मोल्ड को बारे मा तपाइँको सबै सोधपुछ को लागी, हामी २४ घण्टा भित्र विस्तार मा जवाफ दिनेछौं।
हामी राम्रो तरिकाले tranied र भावुक बिक्री र बिक्री पछि सेवाहरु को मालिक।
हामी धनी अनुभवी ईन्जिनियरहरु छ, तपाइँ राम्रो ईवा सामग्री जुत्ता मोल्ड को विकास मा मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
हामी OEM सेवाहरु प्रदान गर्दछौं। ईवा सामग्री जुत्ता मोल्ड मा तपाइँको आफ्नै लोगो छाप्न सक्नुहुन्छ, काठ टोकरा प्याकिंग र अन्य चीजहरु लाई अनुकूलित गर्न सक्नुहुन्छ।